(Xog) Qodoba laga heshiiyay & Wararkii ugu danbeeyay kulanka Villa Somalia uga socda DG & DF - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka (Xog) Qodoba laga heshiiyay & Wararkii ugu danbeeyay kulanka Villa Somalia uga...
(Xog) Qodoba laga heshiiyay & Wararkii ugu danbeeyay kulanka Villa Somalia uga socda DG & DF
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maalintii labaad madaxtooyada ku guddoominaya Shirka Wada-tashiga Dowladda Federaalka Soomaaliya, Dowlad-goboleedyada iyo Gobolka Banaadir si looga arrinsado arimaha doorashooyinka Soomaaliya ee horaanta 2021-da.
Wararka ugu danbeeyay kulankaasi MOL ka helayso ayaa sheegayaan in ay jiraan xooggaa isku soo dhawaashaa oo u dhexeeya dhinacyada halkaasi ku shirsan balse ay wali jiraan qodobo dhinacyada aad ugu kala aragti duwan yihiin oo ku saabsan doqobadii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb3.
kulankii shalay ayaa ahaa mid daah fur ah oo Madaxda isku weydaarsanayeen aragtidooda, lana isku waafaqay in la sameeyo tanaasul balse kulanka maanta uu yahay mid xasaasi ah oo looga doodayo arimaha ku xeeran doorashooyinka.
Caqabada ugu waawayn ee dhinacyada aysan wali isku fahmin waxaa ka mid ah:-
Dowlad-goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koofur Galbeed waxa ay ku adkaysteen in aan lagu laaban qodobadii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb,balse Jubbaland iyo Puntland keenaan aragtiida ku aadan qodobada ay rabaan in wax ka badal lagu sameeyo badalkii meesha laga saari lahaa qodobadii Dhuusamareeb 3.
Qodobada doorashada ee doodda ugu adag ka taagan tahay ayaa ah cida maamuleysa doorashooyinka, maadaama heshiiskii Dhuusamareeb 3 uu awood siinayay Guddiga Madaxa banaan ee doorashooyinka Qaranka.
Madaxda Maamul Goboleedyada, Puntland iyo Jubbaland ayaa diiday waxa ayna, dalbanayaan in la sameeyo Guddi kale oo heer dowlad goboleed iyo heer Federaal, si ay doorashooyinka uga soo talabixiyaan ka dibna u maamulaan.
Sidoo kale Madaxtooyada ayaa doonaysa in ay maamusho xildhibaanada laga soo dooranayo gobolka Jubbada dhexe oo ku jira gacanta Al Shabaab, badalkii lagayn lahaa Magaaladda Kismaayo oo saldhig u ah maamulka Jubbaland ee Axmed Madoobe hogaamiyo.
Beesha Caalamka ayaa isha ku haysa kulanka u dhexeeyo Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo hogaamiye-yaasha Dowlad-goboleedyada Puntland, Galmudug, Hirshabeelle, Koofur Galbeed, Jubbaland iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Cumar Finish, waxa ayna ku cadaadinaysaa in ay gaaraan go’aano la isku raacsanyahay si loo amba qaado doorashooyinka Soomaaliya.
Previous articleGudoomiye Mursal oo hor istaagay mooshin ay wadeen Xildhibaano
Next articleJabuuti oo si farsameysan hawada uga saartay mustaqbalka Dekada Hobyo! Xog? (Q: 1aad)
(Deg Deg) Toogasho ka dhacday Magaalada Garoowe
Wararka inaga soo gaaraya ayaa sheegaya in Toogasho ka dhacday Magaalada Garowe Caasimada Puntland. Ciidamo hubeysan oo ah Canshuur-qaadayaal katirsan wasaaradda Maaliyada ee Puntland ayaa...
(Xog) Halista ku soo wajahan ololaha dib u soo doorasho ee...